Soomaaliya, Qofka Shacabka ahi Xuquuq Ma lee yahay? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Soomaaliya, Qofka Shacabka ahi Xuquuq Ma lee yahay?
21/11/2013 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaanan badanaa la isweydiinin xuquuqda ay lee yihiin muwaadiniintu, waxaadna badanaa maqlaysaa “maxaa shacabku uu sidaas ama sidaas u yeeli waayay.” Waxaad marka kasta degahaada ku soo dacaya sharciyo cusub oo loo sameeyay si muwaadiniinta loogu sheego waxa ay dowladdu iyaga ka rabto iyada oo marnaba aan fursad loo siinin qofka muwaadinka ah inuu helo waxa uu xaqqa ugu lee yahay dowladdaan iyadu mar kasta muwaadiniinta weydiinaysa inay u hogaansamaan shuruucdooda. Waa iga su’aale sharciga ma waxaa loo sameeyaa oo kaliya inuu qabto dadka tabarta daran ee ka tirsan muwaadiniinta Soomaaliyeed?
Waxaa aad iiga yaabiyay, sida ballaaran ee loogu tunto muwaadiniinta Soomaaliyeed khaasatan kuwooda nolol la dirirka ah oo iyagu maalin kasta ku qasban inay nolosha raadiyaan oo aan maalin ka maqnaan Karin meelaha ay a xamaashaan. Markii aad tagto suuqyada waaweyn oo hadda noqday meesha kaliya oo ummaddu u shaqo tagto si ay nolol maalmood kooda u soo saartaan iyagoo askari ay hadba dhinac u ceyrsanayaan oo ay lee yihiin halkaan gaari gacan xamaali ama mid wax lagu iibinayo dushiisa ma dhigan kartin oo waa wado. Waa sax oo waa muhiim in aysan waddadu xirmin, hadana isla magaalada waxaad arkeysaa hoteello waa weyn oo iyagu dhisanaaya bartamaha wadada amaba wada xiraaya. Waa maxay sharciga qabanaaya masaakiinta nolol doonka ah, oo dhaafaaya kuwa daaraha waaweyn dhistay oo weliba dhulkii ummadda ku darsaday. Labadaan qofi miyeysan u sinneen sharciga sheegaaya inaanan wadadha la xiririn, mase waa la jiifiyaa banan, waa yaabe!
Waxaad kalood arkeysaa markaad magaalada mareyso labo baabuur oo uu midi wato qof shacab ah oo danihiisa u socda iyo baabuur isagu ey wataan kuwo qoryo wata oo isku sheegaaya inay yihiin ”security” oo si waalan u socda isla markaasna handadaad iyo af xumo isugu daraya dadka masaakiinta ah ee wadada la isticmaalaya oo iyaguna baabuureyda ah. Yaa isaga goonida u siiyay oo u fasaxay inuu dadka aflagaadeeyo amaba uu si waalan ugu socdo wadadha ummadda ka wada dhexeysa oo uu weliba yiraahdo waddada ha la ii baneeyo? Ma aha wax eynu fahmi karno waxeyse ku tuseysaa in sharciga waddadu uu dadka qaar u fasaxayo inay sidey doonaan u dhaqmaan, muwaadinkuna uusan wax xuquuq ah uusan laheyn markay howshu kala dhexeyso kuwa qoryaha wata oo aadba u moodo inuusan jirin sharci markey meesha marayaan. Allow adaa awood leh.
Waxaa maalin kasta la dumiyaa guryo la lee yahay waxaa lagu dhisay si sharci darro ah, waana aaminsanahy iney sax tahay in wax laga qabto guryaha sharci darrada lagu disay oo ku yaalla meelaha loogu talo galay inay ummaddu wada isticmaasho, waxaase yaab ah waxaa badanaa la burburiyaa oo kaliya meelaha ay masaakiintu degto oo ay aqallada ka dhistaan. Taas ulama jeedo inaan lee yahay in kuwaas la dhaafo ayey aheyd ee waxaan ula jeedaa haddii uu qofi dego meel dowladdu ugu talo gashay dan guud waa in si siman wax looga wada qabtaa oo uusan sharcigu qaban oo kaliya muwaadinka tabarta daran oo aan awooda maal ama midka siyaasadeed aanan la heyn. Sharciga guryo dumintu waa inuu noqdaa mid sima dhamaan dadka oo dhan oo ey weliba degmo kastaaba ay si siman u fuliso, oo aysan jirin degmo degmada kale ka duwan. Allow adaa ummadda u maqan.
Ku tumashada dadka tabarta daran waa waxa soomaaliya geeyay meesha ay maanta joogto, dowlad kasta oo timaadana waxaad moodaa inaysanba dareensaneen. Taas waxaa sii dheer meeshii laga rabay inay dowladdu muwaadiniinteeda u fududeeyso adeegyada ay u heyso waxaad moodaa in meel kasta oo ay dowladi soo gashaba ay dadka dowladda u shaqeeyaahi ay muwaadiniinta ku adkeynayaan adeegii la rabay inay fududeeyaan. Waa yaabe miyeysan shaqaalaha dowladdu u shaqeyn dowladda muwaadiniintaani ay lee yihiin oo la rabay iney iyaga u shaqeyso. Waxaad tegeysaa xafiiss kasta oo ay dowladdu leedahay, ha ahaado heer degmo ama heer wasaaradeed, waxaa runtii adag si uu qof muwaadin ahi uu si sahlan ku galo marka ugu horeysa isagoo wax handadaad ah aanan la kulmin. Markuu galo ka dibna waxaa adag sidii uu ku heli lahaa wixii uu u yimid isaga oon halkaas qof ka aqoon. Waa yaabe Soomaali ma in istaqaanno kaliyaa!
Allow umuurahaan fududee oo fahansii kuwa masuuliyadda ummadda haaya in muwaadinku uu xaq lee yahay oo weliba la rabo in dowladdu sinto dadka iyada hoosyimaada, oo ay weliba ilaaliso wax kala sareyn ah iney dhashaan. Muwaadinku waa inuu dareemaa inuu isagu lee yahay dalkaan oo uusan marti ka aheyn, dadka dowladda u shaqeeyana ay yihiin kuwo u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed oo aan iyagu xafiiska ay ka shaqeeyaan aan ka xigin dadka u soo gelaaya. Waa inay dowladdu ka fikirtaa sidii ay u wanaajin laheyn xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo muwaadiniinta ay maamusho, haddii ay taas ku guulaysan weydana waxaan ka cabsanayaa in isku tumasho iyo isku dulnoolaasho ay maalinkii ay noqotaba ay muwaadiniintu ka dhiidhin doonaan sidii ay uga dhiidhiyeen kuwii ka horeeyay.
Waa in maamulka heer degmo illaa heer wasaaradeed ay fahmaan xuquuqda MUWAADINIINTA oo ay weliba si hufan uga shaqeeyaan sidii ay u kasban lahaayeen kalsoonida muwaadisniinta Soomaaliyeed, si loo gaaro isla shaqeyn iyo waxwada qabsi dhab ah. Waa in shaqaalaha dowladda iyo weliba ciidamada nadab gelyadu ay qadarin dheeri ah siiyaan muwaadiniinta ay u shaqeynayaan oo ay joojiyaan ku tumashada sharcigii la rabay inay dhowraan oo ay weliba ogaadaan in dadka ay u shaqeynayaan ay yihiin muwaadiniinta la rabo inay wada shaqeynta ka helaan. Sharciguna waa inuu noqdaa mid si siman loo dhowro oo sharci fuliyuhu uusan dadka qaar uusan si gooni ah ugu tuman oo uu dhowraa XUQUUQDA uu sharcigu MUWAADINIINTA siinaayo.
« Baroor Diiqda Soomaaliyeed, ee ku aadan falalka guracan fooshana xun ee ka dhaca Dalka South Africa.
Ma Bisaylka Shacabka Soomaaliyeed ayaa isbedelka sabab u ah? »